dmMediaConverter beddel fayl fara badan oo ku saleysan FFmpeg | Laga soo bilaabo Linux
DmMediaConverter wax baddelaha feyliyaha badan oo ku saleysan FFmpeg
DmMediaConverter waa codsi isku dhaf ah taageerada Linux, MacOS iyo Windows, iyada oo ku saleysan FFMpeg oo noo ogolaaneysa inaan u rogo faylasha maqalka iyo muuqaalka kaas oo taageero u leh qaababka ugu caansan, sida h264, h265, vp8, vp9 audio - aac, mp3, flac, pcm, vorbis iyo kuwa kale oo badan.
Codsiga waxay taageertaa maaraynta feylal badan isla markiiba waxayna sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan awoodno inaan qaabeyno isbeddelada mid kasta oo iyaga ka mid ah shaqsi ahaan.
inta u dhaxaysa astaamaha ugu muhiimsan ee dmMediaConverter waxaan iftiimin karnaa awooda ay u leedahay isku darka ama uqeybinta feylasha fiidiyowga, waxaa kamid ah subtitles SRT, dameer, ssa, mov_text iyo dvdsub iyo inbadan, wax ka qabashada wabiyada warbaahineed shaqsi ahaan.
dmMediaConverter ka duwan codsiyada kale, markaad fulinayso hawl ah inaad ku biirto laba faylal oo isku guryo ah, dib uma soo celinayso iyaga, ikhtiyaarkan waa mid aad ufiican oo aan ku ilaalineyno waqti.
Muuqaal kale oo uu tifaftiraha na siiyaa waa karti wax looga beddelo xogta badan ee faylka ah, iyadoon loo baahnayn dib-u-codayn.
1 Astaamaha ugu muhiimsan ee dmMediaConverter:
2 Sidee loo rakibaa dmMediaConverter Linux?
3 Sidee looga tirtiraa dmMediaConverter Linux?
Astaamaha ugu muhiimsan ee dmMediaConverter:
Awood u leh inuu ku biiro noocyada kala duwan ee faylasha (koodhadh kala duwan, xallin, iwm.) Fayl keliya. Xullo wax soo saar leh ballaca ugu ballaaran dhammaan faylasha ilaha.
Qaybi ama jar fayl by dhibco waqti cayiman (iyada oo aan dib-u-codeynta)
U badal faylasha jumlada adoo isticmaalaya astaamaha socodka ama dejimaha gacanta
Macluumaadka Tilmaamaha - Abuur oo adeegso astaamaha maqalka iyo muuqaalka
Safka shaqada: awood ku dar hawlo badan safka shaqada
Shaqooyinka isku midka ah: awood shaqooyin badan qabato isla waqti isku mid ah
Isku hagaajinta sawirka: isbeddelada isla markiiba la soo bandhigo
Miisaanka: beddelo xalka fiidiyowga
Dalagga otomaatiga ah: wuxuu ogaadaa qiimaha dalagga ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'encoder'
Sidee loo rakibaa dmMediaConverter Linux?
Si loo rakibo dmMediaConverter waxaan leenahay xirmooyinka deynta ama rpm si loogu rakibo nidaamkeena.
Wixii ah rakibaadda dmMediaConverter on Debian, Ubuntu iyo derivatives, waa inaan kala soo baxno xirmada deynta ee ku habboon qaab dhismeedkayaga isku xirka xiga.
Haddii aadan aqoon nooca dhismaha ee nidaamkaagu leeyahay, waa inaad fulisaa amarka soo socda:
Taas oo aad ku ogaan doontid haddii nidaamkaagu yahay 32 ama 64 jajab iyadoo tan waxaad ku ogaan doontaa xirmada aad kala soo bixi karto.
Marka soo dejinta la dhammeeyo, waa inaan fulinnaa amarka soo socda si aan ugu rakibno arjiga nidaamkayaga:
Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid ku tiirsanaanta, waa inaad fulisaa waxyaabaha soo socda:
Si aad u awooddo rakibi dmMediaConverter on Fedora, openSUSE, CentOS iyo derivatives, waxaan kala soo dagsan karnaa faylka rpm xiriirka soo socda.
Marka soo dejinta la dhammeeyo, waa inaan ku fulino amarka soo socda barta.
Dhamaadka rakibidda, Kaliya waa inaan ka raadinaa arjiga ku jira liiskayaga si aan u awoodno inaan u socodsiino oo aan u bilowno ku raaxeysiga.
Ugu dambeyntii, kiiska Arch Linux iyo noocyo kala duwan, codsigu wuxuu ku yaalaa gudaha goobaha AUR, sidaa darteed waxaan u isticmaali doonnaa yaourt si aan ugu rakibno dmMediaConverter nidaamkayaga.
Waxaan kaliya u baahanahay inaan furno terminal oo aan fulino amarka soo socda:
In kasta oo arjiga sida uu qabo qoraaga tan si toos ah looga heli karo bakhaarrada Ubuntu, ma aanan dhigin macluumaadka sida loo rakibo maadaama aan hadda adeegsanayo nooca 14.04 lts mana xaqiijin karo haddii meelaha ugu badan ee hadda la dhigaa ay yihiin dalab
Sidee looga tirtiraa dmMediaConverter Linux?
Haddii sabab kasta ha noqotee aad rabto inaad ka tirtirto dmmediaconverter nidaamkaaga, waa inaad ku dalbataa amarrada u dhigma hadba nooca qaybintaada:
para Debian, Ubuntu iyo deriska:
Halka loogu talagalay Fedora, openSUSE, CentOS iyo waxyaabaha ka dhasha:
Ugu dambeyntii, in laga tirtiro Arch Linux iyo noocyo kala duwan:
Haddii aad ogtahay codsi kasta oo kale oo la mid ah dmMediaConverter ama aan sheegi karno, ha ka waaban inaad nala wadaagto faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » DmMediaConverter wax baddelaha feyliyaha badan oo ku saleysan FFmpeg
Salaan ka timid Cuba ... halkan waxaan ku soo saarnay aalad aasaasi ah sida foodda hore ee FFmpeg oo si gaar ah xiiso ugu yeelan karta adeegsadayaasha aan aqoonta badan u lahayn geeddi-socodka beddelaadda, maaddaama tirada xuduudaha ay FFmpeg iyo taageerooyinka kale ee la midka ahi ay aad u badan yihiin, sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan abuurno wax fudud oo shaqeynaya ... waad fiirin kartaa https://videomorph.webmisolutions.com/
Waad ku mahadsantahay shaqadaada wacan ...
Ku jawaab LordFord
Waad salaaman tihiin, ma soo diri kartaan cashar ku saabsan sida loogu badalo feylal fiidiyoow feyl maqal ah tusaale ahaan mp3?
Ku soo jawaab legiongex
Salaan legiongex, ikhtiyaarkaasi wuxuu ku fikirayaa VideoMorph, fiiri xiriiriyahan https://videomorph.webmisolutions.com/ waxaana ka mid ah fursadaha barnaamijka in la soo saaro codka oo lagu kaydiyo qaab MP3 ah, waxay qaadataa 1 guji oo keliya !!!
Waxaan rajeynayaa inaad xalliso ...
Kaliya fiiri dmMediaConverter… caawimaad. Waxaad ka heli doontaa fiidiyow ujeedadaas ah.
Ku jawaab Marius Dalacu
LibreOffice 6.1 wuxuu yeelan doonaa nambarkiisii ​​ugu horreeyay ee alfa wax ka yar laba toddobaad